Qaabka iyo shuruudaha: ciyaaryahanka Afrika ugu wanaagsan ee BBC sanadka 2017 - BBC News Somali
Qaabka iyo shuruudaha: ciyaaryahanka Afrika ugu wanaagsan ee BBC sanadka 2017
11 Nofembar 2017
Magacyada Laacibiinta ku tartamaya ciyaaryahanka sanadka ee BBC Afrika ayaa looga dhawaaqay barnaamij gaar ah oo laga baahinayo BBC World Service, BBC World News, bogagga Internet-ka iyo baraha bulshada.
Bogga codeynta ayaa toos hawada u soo galay.
Faafaahinta codeynta iyo shuruudaha halkan hoose ka eeg
Hannaanka magacaabidda kuwa isku soo haray
Magacaabidda shanta nine e isku soo haray waxaa soo diyaariyay khubaro ka kala socda Afrika iyo meelo ka baxsan, waxaana la weydiistay in ay sheegaan shanta ciyaartoy ee ugu sareysa Afrika, waxayna ku qiimeeyeen darajada 1 illaa 5 (midka ugu wanaagsanna ayuu helayo 5 dhibic).
Waxaa la weydiiyay in xulashadooda ay u adeegsadaan shuruudahan.
Ciyaar wanaag: Xirfadda shaqsiga, awoodda farsamo, wada shaqeynta, saamaynta natiijada, guulaha, wanaagga ciyaarta, iyo horumarinta heerarka waxqabadka.
Saamaynta gobolka: (Waxa uu ciyaaryahanka ku soo kordhiyay kubadda cagta gobolka ee garoomada ama meelaha kale.
Saameynta caalamiga ah: Saameynta uu ku leeyahay ciyaaraha caalamiga ah iyo horumarkooda.
Sidoo kale waxaa la weydiistay in ay qiimeeyaan xilli ciyaareedka laga soo billaabo 1-dii Janaayo 2017 illaa iyo hadda.
Haddii natiijada magacaabidda ay aad isugu dhowaato, kooxda diyaarineysa tartanka ciyaaryahanka Afrika ee sanadkan ee BBC-da waxay leeyihiin awood ay ku ballaariyaan tartanka oo ay ku geersiiyaan illaa lix qof.
Qeexidda cidda xaqa u leh in ay ka mid noqoto
Dadku xaq bay u leeyihiin in ay ka mid noqdaan tartamayaasha ciyaaryahanka kubadda cagta ee ugu wanaagsan Afrika ee BBC, haddii ay u qalmaan in ay u dheelaa xul qaran oo Afrika ah.
Marka la daabaco ciyaaryahannada isku soo haray, Abaalmarinta waxaa go'aan looga gaarayaa codeyn dadweyne oo online ah.
Codeynta waxay billaaban doontaa saacadda markay tahay 6:50 maqribnimo xilliga UK, 11-ka bsihan Nofembar 2017, waxayna xirmeysaa 6:00 maqribnimo xilliga UK, 27-ka Nofembar 2017.
Natiijada kama dambaysta ah waxaa la shaacin doonaa saacaddu marka ay tahay 17:35 GMT, 11-ka Desembar 2017-ka, waxaana toos looga baahin doonaa Focus on Africa TV. Sidoo kale waxaa lagu daabici doonaa bogga ciyaaraha Afrika ee BBC-da, iyada oo ay weheliso dhamaan macluumaadka muhiimka ah.
Haddii la kala adkaan waayo, abaalmarinta waala wadaagi doonaa.
Sida loo codayn karo - Online
Waxaad booqan kartaa boggan , raacna macluumaadkan iyo tilmaamaha online-ka. Codeynta internet-ka way xadidan tahay, waana hal cod kombuyuutar kastaa.
Qaabka iyo shuruudaha codeynta
1. Codka waxaa maamulaysa BBC, abaalmarintana waa in ay waafaqdaa xeerarka BBC ee anshaxa tartanka iyo codaynta oo laga heli kara halkan.
2. Qofka guulaysta wuxuu heli doonaa koob waxaana lagu wareejin doonaa darajada ah ciyaaryahanka kubadda cagta ee ugu wanaagsan Afrika ee BBC ee 2017.
3. Dadka isugu soo hara tartankan waxaa soo xula gudi ka kooban khuburo dhanka kubadda ah oo Afrika oo dhan laga soo kala xulay.
4. Shuruudaha laga fiirinayo qofkaste waa kuwa soo socda: Xirfadda, Farsamada, la shaqaynta kooxda inteeda kale, saamaynta uu ku leeyahay natiijada, guulaha ciyaar wanaagga, Waxa uu ku soo kordhiyay kubadda cagta iyo ciyaaraha gobolka, muhiimadda uu ku leeyahay ciyaaraha caalamiga ah iyo hormarkooda, sanadkan 2017-ka.
5. Dadku waxay ka codayn karaan boggan: BBC Sport African Football.
6. BBC-du Macluumaadkaaga gaarka ah waxay u isticmaali doontaa si waafaqsan Shuruucda waxyaabaha gaarka ah kuwa Cookies, iyo Shuruudaheena isticmaalka . Tusaale ahaan, kala habaynta codadka iyo baaritaanka haddii ay qaladaad dheceen.
7. Wakhtiga u dambeeya ee codaynta waa 1800 GMT ee 27-ka Nofembar, 2017.
8. Go'aanka codayntu waa kama dambays, Laba goorna lama codeyn karo.
9. Abaalmarinta waa in loo qaataa sida ay tahay lamana dib dhigi karo. Ma jirto lacag caddaan ah oo lagu badali doono abaalmarinta. Wax abaalmarin ahna laguma helayo in aad codayso.
10. BBC, iyo dhamaan cidii ay wada shaqayn leedahay ama ay hawl u dirsadaan maqadi karaan masuuliyadda ka dhalata cillad farsamo ama dhibaato kaste oo oo ka dhalata dhanka internet-ka, hannaanka online-ka kaas oo horseeda in cod lumo ama aan si sax ah loo diiwaangalinin.
11. BBC waxay xaq u leedahay in ay joojiso codaynta ama ay dadka qaar xanibto haddi ay jiraan sababo sax ah oo la xiriira in si khalad ah loo codeeyay ama la isku dayay in loo dhaco oo wax isdabamarin lagu sameeyo codaynta. BBC waxay xaq u leedahay in ay doorato hannaan kale oo lagu codeeyo. Si loo baaro marka qalad codeyn ama is dabamarin la sameeyo marka la isticmaalayo bbc.co.uk, BBC-du waxay adeegsanaysaa Cookies ama Log IP addresses. BBC ma daabici doonto macluumaadkaas lamana wadaagi doonto cid kale marka laga reebo meeshii looga baahdo si wax looga qabto.
12. Kuwa ka qaybqaadanaya codaynta waxaa looga baahan yahay in ay aqbalaan shuruucdaas una hoggaansamaan. Fadlan la soco qof u shaqeeya BBC ama qof kaste oo ku lugleh hannaankan abaalmarinta xaq uma laha in uu codeeyo.
13. Dhamaan codaynta waxaa dusha kala socondoona BBC Afrika.
14. BBC waxay xaq u leedahay in ay meesha ka saarto murashax amaba ay hakiso abaalmarinta haddii Sidaas loo arko, ayadoo si xeeldheer loo eegayo, haddii la sii wadayo in musharraxaas ama abaalmarinta ay halis gelineyso in BBC-da ay keento ayadoo diidmo jirto.
15. Codeynta iyo shuruucdaas waxay ku saleysan yihiin xeerarka England and Wales.